Ukuthengiswa Komhlaba Ngokuhlala Nendawo Yokuqasha eKolkata, West Bengal
Uhlu Lwezakhiwo: Izinkatho zomhlaba Umhlaba wokuhlala West Bengal Kolkata
I-1 - 10 yohlu lwe-212
Iziza Zezikhala EJoka, Kolkata
buka Umhlaba wokuhlala eshicilelwe 1 usuku edlule
Indawo yokuhlala iyatholakala ngokuthengiswa eJoka Metro, Joka, Joka, Kolkata Izinsiza ezitholakalayo yile: Gym, Swimming pool, Garden Plot has 1440 square_feet area It is a 3 years Property is inphakathi gated
Izakhiwo Zezakhiwo eThakakurpukur, Kolkata
Indawo yokuhlala iyatholakala ngokuthengiswa eThakurpukur, iThurpukur, iTakurpukur, iKolkata Izinsiza ezitholakalayo yilezi: Gym, Swimming pool, Garden Plot has 2160 square_feet area It is 3 years old Property is in a gated emphakathini
Isiyingi sendlela eThakakurpukur, Kolkata
Indawo yokuhlala iyatholakala ngokuthengiswa eThakurpukur, iThurpukur, iTakurpukur, iKolkata Izinsiza ezitholakalayo yilezi: Gym, Swimming pool, Garden Plot has 1440 square_feet area It is 3 years old Property is in a gated emphakathini
Izindiza Zezakhiwo Khatian, Kolkata
Indawo yokuhlala iyatholakala ngokuthengiswa eKhariberia, Bishnupur, Bishnupur, Kolkata Izinsiza ezitholakalayo yilezi: i-Garden Plot inendawo eyi-1440 square_feet Property ingaphakathi komphakathi one-gated
Iplani Yezakhiwo eShyamnagar, e-Kolkata
Iplani Yezakhiwo eRania, Kolkata
Indawo yokuhlala iyatholakala ngokuthengiswa eThakurpukur, iThurpukur, iTakurpukur, iKolkata Izinsiza ezitholakalayo yilezi: Gym, Swimming pool, Garden Plot has 1800 square_feet area It is 3 years old Property is in a gated emphakathini
I-Kolkata kol-KUT-ə ([kolkata] (lalela), eyaziwa nangokuthi yiCalcutta kal-KUT-ə, igama elisemthethweni kuze kube yi2001) inhloko-dolobha yezwe laseNdiya eNtshonalanga Bengal. Itholakala osebeni olungasempumalanga loMfula i-Hooghly River cishe amakhilomitha angama-75 (47 mi) entshonalanga nomngcele neBangladesh, iyisikhungo esiyinhloko sezentengiselwano, amasiko kanye nezemfundo e-East India, kanti iPort of Kolkata iyichweba elidala kakhulu lase-India nokusebenza kwalo itheku elikhulu lomfula. Idolobha lithathwa kabanzi njenge "dolobha lesiko" laseNdiya, futhi libizwa nangokuthi "Idolobha Lenjabulo". Ngokuya kwe-2011 ukubalwa kwabantu kwaseNdiya, lingumuzi wesikhombisa onabantu abaningi; idolobha lalinabantu abayizigidi ezingama-4.5, kuyilapho inani labantu abangaphansi komhlaba liletha ingqikithi kwizigidi ze-14.1, okwenza kwaba yindawo yesithathu yedolobha enabantu abaningi eNdiya. Ukuqagela kwakamuva komnotho weKolkata Metropolitan Area sekusuka ku- $ 60 kuya ku- $ 150 billion (i-GDP eguqulwe ukuze kuthengwe amandla) okwenza kube indawo yesithathu yedolobha ekhiqiza kakhulu eNdiya, ngemuva kweMumbai neMelhi.Ngasekupheleni kwekhulu le-17, amadolobhana amathathu lawo uCalcutta owabikezelwa wabuswa yiNawab yaseBengal ngaphansi kukaMualal suzerainty. Ngemuva kokuba iNawab inikeze i-East India Company ilayisense lokuhweba e-1690, le ndawo yathuthukiswa yiNkampani yaba yindawo yokuthengisa enamandla ngokuqinisa. INawab Siraj ud-Daulah yathatha iCalcutta e1756, kwathi i-East India Company yakuphinda futhi ngonyaka olandelayo. Ku-1793 inkampani yase-East India yayinamandla okwanele ukuqeda iNizamat (umthetho wendawo), futhi yathatha ubukhosi ngokuphelele besifunda. Ngaphansi kokubusa kwenkampani, futhi kamuva ngaphansi kweBritish Raj, iCalcutta yasebenza njengenhloko-dolobha yezindawo eziphethwe yiBrithani eNdiya kuze kube i1911, lapho ubunzima bayo bakhona, buhlanganiswe nokukhula kobuzwe eBengal, kuholele ekuguqukeni kwenhloko-dolobha eNew Delhi . ICalcutta yayiyisikhungo sombutho wokuzimela waseNdiya; isalokhu iphuphuma umbusazwe wezepolitiki zombuso wesimanje. Ngemuva kwenkululeko yamaNdiya e1947, iKolkata, eyayikade iyisizinda semfundo yanamuhla yamaNdiya, isayensi, amasiko nezombusazwe, yahlupheka amashumi eminyaka yokuqina komnotho. Njengomgogodla we-19th- futhi ekuqaleni kwekhulu le-20th yeBengal Renaissance kanye nesikhungo sezenkolo nenkolo ehlukahlukene ngokwenkolo e-Bengal naseNdiya, iKolkata inamasiko endawo kwidrama, ubuciko, ifilimu, yaseshashalazini kanye nezincwadi. Abantu abaningi baseKolkata — phakathi kwabo abakwaLobel abaningi abayimibhalo eminingi — baba nomthelela kwezobuciko, kwezesayensi nakwezinye izindawo. Isiko leKolkata lifaka ama-idiosyncrasies afaka omakhelwane abasondelene kakhulu (ama-paras) nokushintshaniswa kwengqondo kwe-freestyle (i-adda). Isabelo seWest Bengal embonini yamafilimu waseBangali sakhiwe kuleli dolobha, futhi sisingatha izikhungo zamasiko ezibalulekile ezibaluleke kakhulu kuzwelonke, njenge-Academy of Fine Arts, iVictoria Memorial, i-Asiatic Society, i-Indian Museum ne-National Library of India. Phakathi kwezikhungo eziqeqeshiwe zesayensi, iKolkata isingatha i-Agri Horticultural Society of India, i-Geological Survey yaseNdiya, iBotanical Survey yaseNdiya, iCalcutta Mathematicsical Society, i-Indian Science Congress Association, i-Zoological Survey yaseNdiya, iSikhungo Sonjiniyela, i-Anthropological. Ucwaningo lweNdiya kanye ne-Indian Public Health Association. Yize esekhaya ezindaweni ezinkulu zekhilikithi nama-franchise, iKolkata ihlukile kwamanye amadolobha aseNdiya ngokugxila ebholeni likasoseshini nakweminye imidlalo.